Olee Student Travel Site Train Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee Student Travel Site Train Na Europe
Olee Student Travel Site Train Na Europe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/11/2020)
Student Travel Site Train na Europe nwere ike bụghị nanị na-enwe fun, ma izi na ịnọ, oke. Ọbụna ihe ka mkpa na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ (na nne na nna) adịkarịghị na-eche nke bụ ihe niile bara uru, ndụ management nkà ụmụ akwụkwọ mkpa ịmụta iji ghọọ nọọrọ onwe ha, onwe-eduzi, ọrụ, akọ grownups! solo Student Travel Site Train na Europe nwere ike na-egosi gị ihe karịrị nanị mara mma nlegharị anya.
Ịmụta ịnyagharịa ndụ gị, n'izugbe, dị nnọọ ka mkpa dị ka ịma ihe gị nhazi oge iheomume bụ maka University. I nwere ike na-eche nke na-guzozie A si ma ọ bụrụ na ị na-amaghị otú enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè, jikwaa mmefu ego, ma ọ bụ ọbụna hichaa uwe gị! A oké ụzọ na-amụta banyere onwe gị mgbe na-enwe a oké oge bụ njem ụgbọ okporo ígwè na Europe. Ọ bụ nnọọ mfe ụzọ na-na na ị ga-enwe oge na-chepụta gị ọzọ aga ebe ụtọ a mma echiche. Ya mere, iri na njem na-amụta ihe ọ dị ka si n'ebe ke ata ụwa. Anyị na e nyere gị ụfọdụ echiche ka ị malitere.
Mbụ anyị Student Travel site Train bụ: Enwe A Oge Site The Seine
Mmụta Mmụta Site Train na Europe abụghị naanị ihe ịtụnanya dị ịtụnanya mana ọ bụrụ na ị nwere amamihe ọ nwekwara ike ịbụ n'efu! Ihe na-bụ ezi obere na Paris! Jidere a ole na ole ọnụ ala karama wine na isi na Seine-enwe ude nke akuku na Paris Jazz idaha. Student Travel Site Train na Paris bụ super mfe, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị asụ asụsụ!
Gaa Leta Frederick Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf, na Oscar Wilde na Pere Lachaise Ili Ozu na Paris, France
Anyị na-adịghị na-ata ụta gị ma ọ bụrụ na ị na-eche nke a na otu onye bụ na iju, ma Pere Lachaise na-eli ozu bụ n'ezie n'ezie oké! Atụmatụ: Entry bụ free; download a map na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị tupu ị gaa ịchọta ili ndị ama ama.
Care 4 Agba na Croatia
Student Travel Site Train na Europe pụrụ ịbụ ihe karịrị nanị fun. Dị ka a na-amụrụ, ọ dị mkpa ka na-oge ahụ gị na ahuhu ma ọ bụ nnọọ inye azụ! Ọ bụrụ na ị nwere oge karịa ememe, Gịnị mere? Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ obi na-adị-ezi oge, na-oge na Njem Site Train na Croatia na nleta Kuterevo. A gbara ọsọ ndụ maka aja aja bea chọrọ enyemaka iji na-re-banye ọhịa. Na-akpọ, na-eri nri, ma ọ bụ nanị na-ekiri ụmụ anụmanụ ndị a mara mma.
Ike gburugburu Butterflies na Amsterdam si zoo, Holland
Ka anyị na-na na na na isiokwu nke uwa, nkwụsị ọzọ bụ ụlọ ezumike nke Amsterdam. Emi odude ke obodo zoo bụ nnukwu griin haus jupụtara mara mma butterflies. A n'ezie ahụmahụ pụrụ iche. The zoo nwere anụmanụ ndị ọzọ oke, dị ka sloths, kangaroos, na jaguars! NDỤMỌDỤ: N'oge okpomọkụ ọ na-emeghe ruo mgbe anyanwụ dara na ha nwere concerts 6-8 pm na wine.
Aṅụ na-ulo, ọ dị ka, na The Absolut Ice Bar na Stockholm, Sweden
Stockholm si Ice Bar, nke meghere ke 2002, bụ ma eleghị anya ndị kasị eme ememe mmanya mma ke Sweden. ọ sere 70,000 ọbịa na-agafebeghị afọ, e agba na BBC na CNN, na e agakarị dị otú ahụ siri dị ka Pierce Brosnan na Sweden onwe Stellan Skarsgård. Ebe a n'ezie na-enye ọhụrụ pụtara na okwu “nwere akpụrụ mmiri” Iji mezue ahụmahụ, ọṅụṅụ na-jere ozi ọbụna na oghere ice cubes, na a mmanya mere nke doro anya ice blocks! Ntak iru gị Student Travel Site Train na Europe site itinye a ezumike ọrụ ebe a. Mgbe ị na-na-na na a na-amụrụ, ụwa bụ n'ezie gị oporo.
gaa Leta Bruges, Belgium like other Student Travel by Train
Amalite na ọnụnọ gị na Belgium na a njem nke Bruges. Bruges bụ a obere obodo dị na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Belgium. Foto cobbled Lanes na dreamy ọwa mmiri, na ahịa n'ámá lined na-arị elu elu, akụkọ ihe mere eme na chọọchị, na ndị agadi tere nzu almshouses. E nwere ihe a pụrụ iche amara na spring mgbe daffodils kapet ahụ dị jụụ n'ogige nke akụkọ ihe mere eme begijnhof ichighaazu, ma ọ bụ na oyi (ma e wezụga Christmas) mgbe i nwere ike inwe ihe ndị dị ebube ma ọ bụrụ na oké, a obodo fọrọ nke nta ka onwe gị.
Brussels ka Bruges Ụgbọ oloko
Antwerp ka Bruges Ụgbọ oloko
Halle abụọ Bruges Ụgbọ oloko
Ghent ka Bruges Ụgbọ oloko
nleta delirium Cafe
Ọ bụrụ na ị na-na na na-achọ ihe nke a party, mgbe na-awụlikwa elu on a ụgbọ okporo ígwè na Brussels nnọọ ka ndị ọzọ ibe Student Travel site Train, na nleta delirium Cafe ebe ha nwere 2500 iche iche nke biya mgbata! Ọ bụ nnọọ mfe ịchọta. Ị gaghị agbaghara aha ọjọọ Delirium ịrịba ama nke pink elephant.
Gaa a otu ke Ibiza, Spain
Ihe ụfọdụ i nwere ike na pụọ ​​na mgbe ị na-eto eto, oriri n'abalị(s) pụọ na Ibiza bụ otu n'ime ha! Na-awụlikwa elu on a ụgbọ okporo ígwè na Ibiza na oghere ma ọ bụ mmechi izu maka a ezigbo ahụmahụ! Ndị a izu abụọ, na oghere na-eme na May na mmechi na August / September, nọrọ n'ụlọ nnukwu mba nka si gburugburu ụwa.
gaa agwaetiti, Europe Kasị Ukwuu Music Festival Na Budapest, Hungary
Ọ bụrụ na ị na-na na a nnukwu onye ofufe nke music ememme ị kwesịrị ị na-eme ka Sziget a mkpa. Kwa afọ a izu-ogologo ememme arụ usu nnukwu mba omume Ị nwere ike ma mara ụlọikwuu na ya, ma ọ bụ ịnọ na Budapest nke dị nkume si na otutu dị ka ememme na-ewe ebe ke isuo na n'etiti obodo! and many students like you Student Travel by Train there.
Gaa Mọ Ịchụ nta Na Edinburgh, Scotland as a Student Travel by Train
Far n'okpuru ọrụ n'aka Edinburgh n'okporo ámá e dinara a ọchịchịrị, jụụ, echezọwo ebe. Ke ufọt ufọt n'afo 1980. a set of Underground Vaults e chọpụtara --ulo nke e leghaara fọrọ nke nta ka narị afọ abụọ. Ndị a magburu onwe ọchịchịrị ụlọ na-wuru nke oge ochie Edinburgh nkume, na arched uko ụlọ, ekwú ọkụ, na 18nke narị afọ wine vaults. ma ọ bụrụ na ị na-ekweghị na ghosts a tour na-eme ka akụkọ ihe mere eme nke Edinburgh akpali n'ezie. Nke a bụ kpam kpam ruru 13 quid (11 ma ọ bụrụ na ị na-na na a na-amụrụ!).
N'ihi ya, ọtụtụ European Train Tours na-, ka ọtụtụ ebe na-ada na ịhụnanya na-! Anyị nyere gị dị nnọọ a ghọta ihe i nwere ike gaa na dị ka a Student Travel site Train. Gaa Leta weebụsaịtị Save A Train na-aga ebe ọ bụla obi gị na-achọ na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/student-travel-by-train/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / ru ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#fun europeantravel na-amụrụ ụmụ akwụkwọ TrainStation Train Travel Travel